Bit By Bit - Mass iskaashi - Hawlaha
[ , , ] Mid ka mid ah sheegashada ugu farxada badan ka Benoit et al. (2015) on badnaa-sireed ee manifestos siyaasadeed waa in natiijooyinka waa la sawiran karaa. Merz, Regel, and Lewandowski (2016) siisaa inay helaan cidda qortay Bayaanka ah. Isku day inaad soo saari berdihii 2 ka Benoit et al. (2015) iyadoo la isticmaalayo shaqaalaha ka Amazon Farsamada Turk. Sidee la mid ah natiijooyinka aad ahaayeen?
[ ] In mashruuca InfluenzaNet ah guddi iskaa wax u qabso oo dadka ka sheegaan dhacdooyinka, baahsanaanta, iyo habdhaqanka caafimaadka doonid la xiriira infalawansada-oo kale-xanuun (ili) (Tilston et al. 2010; Noort et al. 2015) .
Isbarbardhigaan oo design ah, kharashka, iyo khaladaad badan tahay in InfluenzaNet, Flu Isbeddellada Google, iyo nidaamyada hargabka raadraaca dhaqanka.
Ka fikir waqti aan saldhigan, sida ka dillaacay ifilada doofaarka. Qeex khaladaad ay suurtagal tahay in nidaam kasta.
[ , , ] Economist waa magazine ah news todobaadle ah. Abuur mashruuc aadanaha xisaabinta loo arko haddii saamiga ay haweenku u leeyihiin rag on daboolka ayaa kor u kacay muddo.
Magazine ayaa yeelan kartaa daboolida kala duwan siddeed gobol oo kala duwan (Africa, Asia Pacific, Europe, Midowga Yurub, Latin America, Bariga Dhexe, North America, iyo United Kingdom) oo kulligoodna way soo bixi karaa bogga internetka ee The Economist . Dooro mid ka mid ah gobolladaasi oo uu ku sameeyo falanqaynta. U hubso in aad ku tilmaami habka aad la faahfaahsan oo ku filan in ay laga hirgalin karaa qof kale.
Su'aashani waxaa uu ku dhiiraday by mashruuca la mid ah by Justin Tenuto, saynisyahan xogta shirkadda crowdsourcing a CrowdFlower , arki "Time Magazine aad ayuu u jecel nacasiin ah" .
[ , , ] Dhisida su'aasha kor ku xusan, hadda oofin falanqaynta ee dhammaan sideed gobol.
Maxaa kala duwan ayaad ka heli guud ahaan gobollada?
Waqti intee le'eg dheeraad ah iyo lacag ku qaadatay inay falanqaynta si aad u dhan sideed ka mid ah gobollada ay qaaddo-up?
Ka soo qaad in Economist uu leeyahay 100 daboolida kala duwan todobaad kasta. Qiyaasta inta waqti dheeraad ah iyo lacag ku qaadan lahaa in aad falanqaynta qaaddo-ilaa 100 daboolida toddobaadkii.
[ , ] [Kaggle] (https://www.kaggle.com/) waa website a in marti mashaariicda call furan. Qayb ka mid ah mashaariicda kuwa.
[ ] Eeg dhex arin dhawaan joornaal aad beerta. Ma jiraan wax waraaqo la reformulated karin sida mashaariicda call furan? Maxaad ama maxaa diidaya?
[ ] Purdam (2014) ku tilmaamay ururinta xogta ku saabsan qaybiyey dawarsanayay ee London. Soo koob liito iyo design of cilmi.
[ ] Shaqo waa hab muhiim ah si ay u qiimeeyaan tayada xog ururinta qaybiyey. Windt and Humphreys (2016) horumarinta iyo tijaabiyo nidaamka si ay u ururiyaan wararka dhacdooyinka khilaafka ka qof oo ku nool bariga Congo. Read warqada.
Sidee ay design hubiyo shaqo?
Waxay bixiyaan habab dhowr ah si loo ansixiyo xogta laga soo ururiyay ay mashruuca. iyaga koob. Waa kuwee ahaa ugu qancin in aad?
Soo jeedinayaan hab cusub oo xogta lagu ansixiyey yaabaa. Fikrado soo jeedina waa inuu isku dayaa in la kordhiyo kalsoonida in aad leedahay lahaa in xogta hab waa kharash-ool ah iyo anshaxa.
[ ] Karim Lakhani iyo asxaabtii (2013) abuuray call furan dalbi algorithms cusub si ay u xaliyaan dhibaato bayoolaji xisaabeed. Waxay heleen in ka badan 600 gudbiyeen oo ka kooban 89 habab xisaabeed sheeko. Of soo gudbiyo, waxa ay heleen 30 in ka sii badnayeen waxqabadka Qaranka Machadyada Mareykanka MegaBLAST Caafimaadka ee, iyo soo gudbinta ugu fiican gaari labada sax weyn iyo xawaaraha (1000 jeer ka dhakhsi).
Read ay warqad, ka dibna soo jeedin dhibaato bulsho cilmi in isticmaali kartaa nooc ka mid ah tartanka furan. Gaar ahaan, noocan oo kale ah tartanka furan waxaa diiradda lagu saaray ilaa xawaaraha iyo horumarinta waxqabadka geynta ah ee jira. Haddii aadan u malayn kartaa dhibaato sidan oo kale in aad beerta, isku day inaad sharaxdo sababta aan.
[ ] Mashaariic badan oo xisaabinta aadanaha ku tiirsan yihiin ka qayb-galayaasha ka Amazon Farsamada Turk. Gal-up si ay u noqdaan shaqaale on Amazon Farsamada Turk. Waqti hal saac waxaa ka shaqeeya. ma saamayn this fikirradiinna ku saabsan design, tayada, iyo anshaxa mashaariic compuation aadanaha Sidee?